Ezemidlalo Ukudla Kwabesifazane abakhulelwe
Wonke owesifazane ohlela ukukhulelwa, ulungiselela kusengaphambili ukuthi uzothola isisindo. Ukuze wonke ukhulelwe, ngokusho kwedatha ehlukene, owesifazane uthola 12-20 kg. Amanye amantombazane ngenxa yezimpikiswano ezinamandla ngokuqondene nesibalo sabo ngesikhathi sokukhulelwa bakhetha ukungayeki ukudla okuhlukahlukene. Kulesi sixhumanisi, umbuzo uvela: ngeke yini ube yingozi kumntwana ozayo?
Ayikho impendulo engacacile kule ndaba. Phela, uma kukhona okususwa ekudleni, ingane ngeke ithole izinto eziwusizo, manje ezidingekayo ekuthuthukiseni okujwayelekile, futhi nokulungiselela ukuzalwa.
Kukhona olunye uhlangothi lwemali. Ngesikhathi sokukhulelwa, amakhilogremu angaphezulu angabangela ekuthuthukiseni i-toxicosis, engathinta ukuthuthukiswa kwe-fetus, ukwandise amathuba okuba nezinkinga ngesikhathi sokubeletha. Ukuze ugweme amakhilogremu angaphezulu ngesikhathi ukhulelwe, udinga ukuqapha ukudla kwakho - kufanele kube nokulinganisela. Futhi-ke akudingeki ukwesaba amakhilogremu engeziwe futhi umntwana uzoba enempilo. Emva kokubeletha izinyanga ezimbili (ngezinye izikhathi ezintathu) kamuva ungabuyisela isithombe sakho.
Ukudla okunomsoco ngokuqondile kusho ukufaka ngaphandle kwemenyu ehlanzekile imenyu, kanye neziphuzo kanye nemikhiqizo yokufakelwa.
Masikhulume kabanzi mayelana nokudla kwabesifazane abakhulelwe
Ngesikhathi ukhulelwe, kudingeka udle izithelo, imifino, imikhiqizo yobisi omuncu, kubandakanya ubisi (yonke imikhiqizo ingokwemvelo).
Imenyu kumele iqukethe imikhiqizo ekhuthaza ukuphulukiswa nokuhlanzwa kwayo yonke inyama, ngendlela engokwemvelo: amaji wezithelo nemifino (uma efunwa, ingahlanjululwa ngamanzi ngesilinganiso se-1: 1); Imifino eneziqongqo nesikhumba, ibhamini, izithelo nezinhlamvu.
Ukudla kungcono ukungadli okuningi, okunye okunye nemikhiqizo ewusizo equkethe amaprotheni. Ekudleni kufanele kwenezelwe inyama yenkukhu, imikhiqizo yobisi, izilwane zasolwandle, amantongomane, amakhowe, ama-porridges.
Kunconywa ukunciphisa ukusetshenziswa kwetafula lendabuko, njengoba lokhu kungabangela ukwanda kwamanzi emzimbeni.
Nciphise isikhathi semikhiqizo yokupheka. Izitsha kufanele ziphekwe kangcono nge-steamer, futhi imikhiqizo gazinga kangcono ngamafutha amancane.
I-microelements namavithamini ngomzimba kungcono kakhulu ekutholeni ukudla. Amavithamini emaphilisi omzimba angumthwalo omkhulu, ikakhulukazi ngesikhathi sokukhulelwa, ngoba umzimba wesifazane nokunye umkhawulo. Amanye amavithamini akwazi ukubuthelela emzimbeni, futhi okweqile, njengokuntuleka kwamavithamini, kubi ngomzimba.
Ngesikhathi sokukhulelwa kubalulekile ukuqapha amamenyu akho, kepha futhi mayelana nokusatshalaliswa kokudla kwansuku zonke akufanele futhi ukhohlwe. Ukudla okungcono kakhulu kwekhalori kungadliwa ngaphambi kokudla kwasemini, ukuze kudle kungcono ukushiya ukudla okukhanyayo - imikhiqizo yobisi omuncu, i-calorie ephansi e-cottage shizi, ama-saladi yemifino, egqoke ngomnqumo noma ngamafutha yemifino.
Kusihlwa, ikakhulukazi ngemva kwamahora angu-7-8 akunconywa nhlobo ukuba nidle, ngoba umzimba wethu ulungiselela umbhede (kanye nomntwana). Uma kwenzeka kukhona umuzwa wendlala, ungaba nesidla ngamantongomane, izithelo ezomisiwe, i-bran - lezi mikhiqizo zenza ukuba kube nokushisa okusheshayo. Ngisho nomzimba omncane womzimba uzothola amandla okwethula amandla okwanele.
Ukwanda kwesisindo somntwana, njengombuso, kwenzeka enyangeni yokugcina. Ngakho-ke, kule nkathi, noma nini kungenzeka, kunconywa ukuba udle isinkwa esimhlophe, amaqanda, inyama izitsha noma inyama.
Ngaphambi kokubeletha (amasonto ama-3) kunconywa ukuthi ungabandakanyi emikhiqizweni yemenyu yezimvelaphi zezilwane, imikhiqizo yobisi nemikhiqizo yobisi (ngenxa yemali enkulu ye-calcium). Kungcono udle izithelo, imifino kanye okusanhlamvu.
Uma ubambelela ekudleni okufanayo kwabesifazane abakhulelwe, isisindo sokuzalwa se-fetus sizofinyelela ku-3 kg, futhi lokhu kuyisibonakaliso esihle, ngoba umsebenzi ulula kakhulu kokubili abesifazane nabantwana.
Qaphela ukudla ngesikhathi ukhulelwe noma cha, kungcono kuwe, kodwa khumbula, kukho konke okudingayo ukwazi isilinganiso!
Amaphethini abesifazane abakhulelwe ngezandla zabo
Ngingayiphuza ini futhi ngingakanani?
Ukuzivocavoca ukuqinisa imisipha emihle
URoberto Cavalli uthengise umkhiqizo wakhe
Isikhathi sokukhanda izinwele zokuqala kwengane
Emncintiswaneni "Hlangana Nhlobo Ehlobo Lokwakhiwa"
Sakhetha isiqephu somlobokazi - iseluleko somlimi wezimbali
I-Cottage Ushizi ku-Multivarquet kusuka ku-Kefir
Isibani sombane esasondela eduze kwengane
Izakhiwo eziwusizo ze-feijoa